Ngabe amabhayisikili wezintaba zeBMC mahle? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ukubuyekezwa kwamabhayisikili e-bmc - ukulungisa kanjani
Ukubuyekezwa kwamabhayisikili e-bmc - ukulungisa kanjani
Ngabe amabhayisikili wezintaba zeBMC mahle?
Ukuba ngumkhiqizo oqondiswe ekusebenzeni,BMCiyaziqhenya ngobunjiniyela bayo futhiifreyimuubuchwepheshe. Leziemabhayisikiliziyi-kuhlechoice uma unentshisekelo yokuthola isiphetho esiphezuluifreyimunokuthuthukisa izinto njengoba uhamba, noma ngokuyisisekelo uma ukhathazwa kakhulu yi-ifreyimukunophawu kumashifu nakumabhuleki.
10 Amaphuzu ePinkbike kunoma ngubani ongacabanga ngesifinyezo esihle salokho iBMC emele khona. Sarah, uyazi ukuthi empeleni imeleni? Abadali kakhulu lapho. - Inkampani Yokukhiqiza Ibhayisikili.
Umqeqeshi we-kirk kinetic
Sicabange ukuthi kuyajabulisa kakhulu, ngakho-ke uma unokuthile okujabulisa kakhulu kunalokho, sicela usazise, ​​kungenzeka bakushintshe ngokususelwa kumazwana kaPinkbike - angicabangi ukuthi bazokwenza kanjalo. (USarah uyahleka) (upbeat techno music) - Sanibonani nonke. Igama lami nginguSarah Moore futhi silapha eSun Coast ukuthola okunye ukubuyekezwa kwe-Value Bikes Field Trip.
Nami, le yi-BMC's stroke-aluminium, ethengisa nge $ 1,600. Siyivivinya esigabeni se-hardtail. IBMC ibinabagijimi bezwe abashesha kakhulu emabhayisikili abo eminyakeni edlule.
Kubandakanya umpetha wama-Olimpiki amahlandla amabili uJulien Absalon futhi manje basanda kusayina umpetha womhlaba wamanje uPauline Ferrand-Prevot ngamabhayisikili amanani. Leli bhayisikili libukeka lishesha, ima nje, abakwaBMC bathi elenzelwe ukubeka amarekhodi akho ekukhuphukeni kanye nokugibela Ifanele ithrekhi yakho yasemaphandleni. Imininingwane yohlaka ifaka umzila wekhebula wangaphakathi owengeza kulokhu kubukeka okuhle.
Futhi kukhona ubakaki ongezansi onentambo. Ifika ngosayizi abancane ngokwengeziwe okukhulu, onke anamasondo angama-intshi angama-29. Awekho kulawa mabhayisikili afika nezihlalo ezisehliswayo, ezonga izindleko, kodwa futhi akuvamile ukuthi ibhayisikili eliwela izwe lonke lingabi nesihlalo sokwehla.
Amanye alawo mabhayisikili angama- $ 10,000, iTrek Supercaliber, iCannondale Scalpel engiyihlolile esivivinyweni senkundla yezwe lonke, nawo afika ngaphandle kwezikhala zokudonsela phansi. Leli bhayisikili liza nalesi siqu se-slam futhi akukho spacer spacer, esizothandwa yi-racer enqamula izwe. Ngeke wenze noma iyiphi indawo yokuphatha ngaleli bhayisikili.
Ngakolunye uhlangothi, ibhayisikili eliwela izwe lonke, futhi ngakolunye uhlangothi, isivalo semfoloko esididiyelwe, okusho ukuthi izibambo zakho ngeke zijikeleze ngaphezu kwama-degree angama-90. Ake sifike ku-geometry. Nge-engela engu-67 degree tube kanye ne-angle yesihlalo engama-degree angama-75, lokho kungazwakala kunolaka uma siyiqhathanisa namanye amabhayisikili omzila kulesi sigaba.
Kepha uma sibheka amabhayisikili enqamula izwe esibe nawo esivivinyweni sokugcina senkambu, empeleni sikhululeke ngokwedigri se-degree kune-Epic ekhethekile, ebesithi iyi-geometry esikahle kunazo zonke. Kunezinguqulo ezimbili ze-aluminium ze-stroke ezimbili ngamanani aqala ku- $ 1,200. Uma ungathanda inguqulo yekhabhoni, kunezinto ezine ongakhetha kuzo, ngamanani aqala ku- $ 2,200.
Ibhayisikili lethu lokuhlola nayi iBMC Two-Stroke AL ​​One, eza neRock Shox Recon, ifolishi lamamilimitha ayikhulu elinokuvalelwa esangweni lesibambo Ine-SRAM NX, idrayivu exutshwe ne-SX, amabhuleki eShimano Deore, neVittoria Barzo amathayi anobubanzi obungu-2.25. Kubiza u- $ 1,600 futhi kunesisindo esingamakhilogremu angama-27.
Kwanele ngemininingwane. Ake singene kulokho ofuna ukwazi ngempela ukuthi kuhamba kanjani emizileni (umculo) - Ngaphambi kokuthi sihambe ezindleleni, yini okudingeka uyenze ngaleli bhayisikili? - Ngakho-ke usetha imfoloko yeRock Shox ngokuya ngezinombolo ezikuhlelo lwabo lweTrailhead. Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu abanalo, ungalusebenzisa lapho.
Sibe sesibeka amathayi afinyelela ku-21.23 PSI, njengoba nje senze kuwo wonke amanye amabhayisikili - nginombuzo nokho. Ukuze iBMC ifike lapha, igxotshwe ngokuphelele ngesiqu futhi ayinaso isikhala sehedsethi.
Ngakho-ke uma ubufuna ukuthi izibambo ziphezulu, awunakho okukhethwa kukho. Vele wenze i-yoga yakho ngifuna ukugibela leli bhayisikili - Hawu mfana. (UMike uyahleka) (umculo othambile) - Kulungile, uSarah.
Ngakho-ke iBMC ibala le nto njenge-hardtail yezinga lokuwela. Ngakho-ke kusobala ukuthi kufanele kube kuhle ekukhuphukeni. Ngisho, kubukeka kushesha nje ukuhlala lapho.
Kwenzakalani? - Yebo, kubukeka sengathi ibhayisikili elisheshayo kunawo wonke ama-hardtails engingasho. Futhi uyazi, ayibukeki nje, ikhuphuka kahle impela. Futhi uyazi ukuthi kubonakala sengathi kuwubuwula ukusho, kepha yiyona esebenza kahle kakhulu kuma-hardtails ekukhuphukeni. - Angicabangi ukuthi kuwubuwula lokho.
Ngakho-ke kusobala ukuthi ayinakho ukumiswa ngemuva ngakho-ke izoshesha kodwa isikhundla ekubeka kuso ngicabanga ukuthi yilokho okuqonde kakhulu, isikhundla esikubeka kuso sikukhuthaza ukuthi ungene kanzima ukuze unyathele amaphedali. Ngangingemuva kwakhe. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi Ngakho-ke lapho ukuleso sikhundla esiphansi, nalesi siqu eside, konke ofuna ukukwenza ukunyathela ama-pedals, uyazi, futhi kwenza, uyazi, ukuthamba nge-ferratas kulula.
Uyazi, usontekile emzileni wakho owodwa. Futhi nangesiqu eside, isiteringi sisaqondile futhi sifuna nje ukugibela. Uyazi, kwenza ukukhuphuka kube yinto emnandi ukuyenza. - Ngakho-ke uSarah, weqa ubuyela emuva futhi phakathi kwale BMC nale Vitus.
Amabhayisikili ahluke kakhulu, enzelwe izinto ezihluke kakhulu, ukulunga. Kepha ngitshele ukuthi bagibela kanjani bobabili, emzileni owodwa, lapho uthola ukuba ncanyana nokuhamba kancane - yebo. Ngisho ukuthi ungababuka bese ucabanga ukuthi uyazi ukuthi i-hardtail yinto eyodwa, umuntu angazizwa kanjani engcono kunomunye? Futhi yilelo geometry kule BMC elinolaka nje futhi yikho nje ukuthi ufuna ukunyathela amaphedali uma uhleli kuleli bhayisikili.
Futhi kumnandi uma ushintshela emuva naphambili phakathi kweVitus neBMC, iVitus izizwa ime mpo. Cishe njengawe, ngenza ihlaya ngesikhathi silishayela. Ngokungazelelwe ngise-hybrid - Isiqu sakho ongasiguqula besiphezulu kakhulu - Yebo.
Bekufanele ngehlise isiqu, uyazi- sehlise kancane. - Ngakho-ke, leli ibhayisikili lendabuko ngokwengeziwe ngenkathi iBMC izwa nje, impela inolaka kakhulu. (umculo othambile) - Kulungile.
Ngakho-ke iBMC ngokusobala iyi-hardtail egxile ezweni lonke. Imijaho yezwe elinqamulelayo isahamba iye ezansi futhi imijaho yasemaphandleni isenganqotshwa noma ilahleke kuma-descents. Injani iBMC endleleni ebuyayo? - Yibhayisikili elinomuzwa wendabuko ngokwengeziwe kulo, noma ngabe linezinombolo ezihamba phambili ezinqamula izwe - ezweni eliwela izwe, kungama-67, 67-degree head angle ngaphambili kwento.
Ngisho, ngigibele amabhayisikili amaningi amadala asemasimini ayesabeka impela. - Ngisho neCanyon Lux ebesigibele ngayo ibinendawo yeshubhu lekhanda lama-degree angama-70. Ngakho-ke lelo libhayisikili elikhulu kakhulu. - Yebo.
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi esikushoyo ukuthi yebo, kusobala ukuthi umkhululi uyakwazi kakhulu ukwehla, uketshezi kanye ne-vitus - akusikho ukuqhathanisa okulungile - akuyona i-apula ukuqhathanisa i-apula - yebo. Ngokwazi ukuphatha, uma leli bhayisekili belinendawo yokwehlisa bekungaba ukwehla okuthembayo ngempela kwebhayisikili elinqamula izwe. - Kodwa kuzwakala sengathi usho ukuthi ngabe le nto ibinokudonswa okwehliswayo, akuyona yini i-geometry ebambe iBMC emuva kuma-descents, akunjalo? Kuthiwani uma sikhuluma ngamabhayisikili e-cross country, ngisho ukuthi yinto enhle leyo, akunjalo? - Yebo.
Futhi kunzima kakhulu kunamabhayisikili wokumiswa ngokugcwele esiwahlole kuma-descents. Futhi kufanele ukhethe imigqa yakho ngokucophelela. Uma ushayela kanzima, maningi amathuba okuthi wena, uyazi, uphume ungaxhunyiwe ku-inthanethi, kodwa kuyini-- Khulumela wena Sarah.
Angibanga nayo yonke le nkinga ngomlimi. (ehleka) Kepha uma sikhuluma nje ngamabhayisikili anqamula izwe, ngiqonde ukuthi, iyisikhulu esinekhono sanoma yini, ukumiswa kwangemuva noma cha. Kulungile Sarah, ake siqede ukwehla kweBMC bese sifika kulento eyodwa okufanele siyikhumbule njengebhayisikili lokugijima elihamba ngezinyawo.
Iyini imicabango yakho yokugcina ngale nto? Uyazi ini, uma wehla ebhayisikili elidala eliwela izwe lonke bese ushintshela kule nto, kuzokwenza umehluko omkhulu. Njengoba nje kuyibhayisikili eliwela izwe eliphethe kahle kuma-descents. Futhi akulungile ukukuqhathanisa nesikhukhula seRocky Mountain nanoma yini.
Kusebenza kahle kakhulu ekukhuphukeni futhi yilokho okutholayo kuma-descents. (umculo othambile) - Kulungile. Masifike ezingxenyeni ezithile futhi ake siqale ngalokho okuthandile kuqala, uSarah - ngiyithandile impela imfoloko yeRock Shox yokuhlola, amamitha ayi-100 wokuhamba, kepha isebenza kahle impela.
Futhi ufake nesibambo, ukukhiya ngaphandle. - Wonke umuntu ngaphandle lapho uthi 'Lockout on the handlebars'? Awudingi lokho, kodwa-- Ngenhloso, ngicabanga ukuthi kunengqondo ukuthi ufuna ukuba yingxenye yomjaho wezwe eliwela izwe futhi ukhiye imfoloko yakho ngaphandle. Ufuna ukusebenza kahle. - Kulungile.
Impela. Ngakho-ke yiziphi ezinye izinto ngalesi sakhi sebhayisikili ezinengqondo - ngicabanga ukuthi la mathayi enza umqondo wazi ukuthi ligingqika ngokushesha. Uthola umuzwa wokuthi awudingi isondo elibanzi ekukhuphukeni, uhlobo lwebhayisikili. - Kulungile.
Manje ake sikhulume ngezinto ongazithandi ngezakhi, bekuyini leyo? - uyazi ukuthi inenhlanganisela ye-SX ne-NX esebenza kahle kepha hhayi kahle njengejubane le-Deore 12 kanye ne-ergonomics yokuthi ishifter isebenza kanjani akuyona leyo eqondile lapho ibhangqwe nalawa mabhuleki eShimano - yebo. Nansi into lapha. Lokhu, lokhu kushintsha, kulungile kubhuleki likaShimano futhi kunzima ukufika kulo, akunjalo? Yebo.
Futhi ngiyakhumbula ukuthi kusukela ohambweni lwenani lokugcina lesikwenzile. Ngama-Ergonomics, ngiqonde ukuthi uma uthenga ibhayisikili elisezingeni lokungena awulitholi, ngakho-ke kunzima kancane ukuqhathanisa iBMC namanye ama-hardtails ngoba akuwona ama-aphula ncamashi nama-aphula, angabe nguSarah? IBMC inezinhloso ezehluke kakhulu kunamanye amabhayisikili. Kepha kuseyi-hardtail yesibili ebiza kakhulu eqenjini futhi ayizi neposi yokwehlisa - yebo, ayizi neposi yokwehlisa.
Ngakho-ke uma ufaka okukodwa kwalokhu okungenani okungama- $ 200. Futhi enye, uyazi, uma siyiqhathanisa namanye amabhayisikili, inayo le SX, NX drivetrain engenayo i-ergonomics enhle hhayi enhle amashifu uma kuqhathaniswa namanye amabhayisikili anezimoto ezingama-11- noma eziyi-12 zeDeore drive ezifakiwe - Yebo. Kuyasebenza nje.
Wenza umsebenzi wawo futhi asikho isidingo sokuwuguqula uma usebenza kahle. Kepha ngiqonde ukuthi, akungabazeki ukuthi lezi zinto azizizwa ziseduze njengokuthile, ikakhulukazi uma ufaka ugesi. lokhu engikushoyo, kuyibhayisikili lomjaho onqamula izwe lonke - ngakho-ke mhlawumbe ushintsha ugesi - ncamashi.
Yebo. (umculo othambile) - Ngicabanga ukuthi leli ibhayisikili elihle lokungena ezingeni eliphakeme, lomuntu ongena nje kuphela emjahweni. Kuzoba ukukhetha okuhle, hhayi okubiza kakhulu, futhi ungathola i-geometry enhle ngaphandle kokuphula ibhange.- Yebo.
Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyinzuzo enkulu yale nto ukuthi isebenzisa i-geometry enhle kakhulu enenqubekela phambili. Futhi ngiyazazi lezo zinombolo, azibukeki zizinhle ephepheni, kepha ngebhayisikili lomgwaqo onqamula izwe, nakanjani uhlangothi oluqhubekela phambili. Ngakho-ke ngentengo yebhayisikili, ngokuqinisekile uthola i-geometry yokusetha ukuthambekela. - Futhi enye inzuzo ukuthi kuhle kanjani ukukhuphuka.
Kusebenza kahle kakhulu, ukuma okunolaka, amathayi aginqika ngokushesha. - Bye Sarah, ngizokubona phezulu lapho bese ungilinda phezulu lapho. (umculo othambile) - Kepha uma singena ku-cons, ngiqonde umuzwa wokwehla.
Ngeke kube kanjalo, uyazi, ngeke uhambe ngokushesha emabhalweni njenganoma iyiphi enye indlela yebhayisikili. - Kepha lokho akusho. - Yebo.
Ngiqonde ukuthi, kusesekubi - kusesekubi. Kepha ngicabanga ukuthi okuningi kwebhayisikili kungavulwa ngokubeka nje isihlalo sendawo ebhayisikili - Noma kunjalo, uma ufuna ukwehla ngokushesha ngejubane kufanele uthuthuke uye esihlalweni esiwisayo. - Yebo.
Enye into okufanele siyisho uSarah, loluhlaka lunezici eziningi ezinhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi ibhayisikili elibukeka kahle kakhulu lapha. Ayinikezi ukuvikeleka okuningi kozimele ngakho-ke kuzofanele ungeze okunye njengoba wenza. (umculo othambile) Kulungile.
Isikhathi sokuyisonga lapha ngale BMC. USarah ucabangani? Ithini imibono yakho yokugcina ngalolu daba? - Yebo, iBMC inyusa leli bhayisikili njengebhayisikili ofuna ukusukela kulo amarekhodi akhuphukayo, iya emijahweni yangakini yezwe, futhi ngingathi bayabonakala. Lokhu yilokho mina, uyazi, engingakutusa kumngane wami uma befuna ukungena emijahweni yezwe lonke ngaphandle kokwephula imali ebhange, futhi inezinombolo ezinhle zejiyometri, vele ungeze lokhu okuthunyelwe futhi ungangeza noma yimuphi umjaho wezwe lonke futhi uthole phezulu ngokushesha okukhulu ngale ndawo yokukhiya izintaba, ibhayisikili lomgwaqo.
Kulungile, ngakho-ke eyeBMC Two-Stroke AL ​​One. Hlala ubukele izindatshana eziningi nezingxoxo zetafula eliyindilinga. Sizokhuluma ngokuthi la mabhayisikili asebenze kanjani bese siwaqhathanisa nakakhulu, qiniseka ukuthi uyawathanda futhi uyabhalisela futhi sizokubona esihlokweni esilandelayo. (Umculo othambile)
Enziwa kuphi amabhayisikili e-BMC?
Bengikhathazeke kakhulu ngawe ngeke ngikuvumele wenze eminye imijaho yamabhayisikili..Sawubona, iTrael Cruise lapha! Namuhla usuku lomjaho eJapan SiseNagoya esifundeni sebhayisikili saseMorikoro Park nginebhayisikili lami lomgwaqo iBMC SLR01 lapha futhi nevesti lami lokuphepha angihambi kulo mjaho wangempela.
Ngisebenza njengomshayeli osekela ezokuphepha ngikwenza lokhu minyaka yonke ngenza udaba lwagcina ukuwa futhi ngenza udaba olusha namhlanje ngisanda kuqeda umjaho wami wokuqala, kulokhu izinhlanga ezintathu. kwakukhona umjaho wehora elilodwa, bese kuba khona umjaho wamahora amathathu, bese kuba khona umjaho wamahora amabili. Kuyaxaka kancane, bahlanganisa abaqalayo kanye nochwepheshe ndawonye..abaningi kakhulu abantu abasheshayo emjahweni wokuqala, umjaho oshesha kakhulu namuhla kungenzeka kube umjaho wamahora amabili owafudumeze amadolo, lezi yizimoto zami ezifudumele zeTaiyaki, kodwa mina ngicabanga ukuthi ngizowasusa kungekudala futhi nginezindawo zami zokufudumeza ingalo zeWolverineSports Club Nginamasokisi ami amasha e-DKDanny Little amele uDanny Klein lapha kwinganekwane yaseJapan evela endaweni yaseDetroit Michigan, ngakho-ke sizogibela amamayela amaningi namuhla ukuhlonipha umngani wami omuhle, umlingani wami wakudala uDanny Klein, futhi inhloso yami namuhla ukugibela u-200 km engiwusebenzisayo ngithole uGarmin wami, kepha ngisanda kuthola ikhompyutha entsha ye-wahoo.
Angikabi naso isikhathi sokuyihlola okwamanje futhi ngethemba ukuthi ngizokwenza udaba ngakho kusasa ukuze ngikwazi ukuqopha ukukhishwa kanye ne-test drive esihlokweni sokuqala kufanele kube yimpelasonto enhle enelanga futhi sihambe kahle kakhulu namuhla Isimo sezulu esihle libalele kimi empeleni ngilambile kahle ngakho-ke ake sithole ukudla okulula ngaphambi kokuba siye emjahweni olandelayo ngakho ngibhale lapha namuhla ngithole isikhwama sami esisha se-cadence pendulum esikhwameni le nto inkulu, ingafaka izinto eziningi lapho nokuthi ukudla kwami ​​okulula namuhla ngakho-ke sinegama elithile le-daifuku futhi ngiyathanda ukuthi muva nje leli ibhisikidi lamaprotheni engilingenisa ngehabhu ngishiya isixhumanisi esingezansi ukuze ukwazi ukuthola lokhu kushibhile impela eJapan uma ulithenga ngobuningi futhi Impela, amandla echibini lamanzi kanye nemithombo eyengeziwe yamanzi, ngakho-ke masisethe okuthile ngaphambi kokuya emjahweni olandelayo, sisebenzisa izinjini ezilungele ukuhamba ngamabhayisikili eGoPro Selokhu sizoqala umjaho wamahora amathathu, kodwa sinemizuzu embalwa ngaphambi baqala, ake sihambe kancane umkami uzoma empeleni ngemuva kwesikhashana ukuze umbone kamuva esihlokweni, ethule efile, ebengikwenza bekune-ike kepha manje sengithanda umsindo ngakho nansi indawo yethu enkulu sinamanzi ashisayo lapha ungathola itiye lekhofi le yindawo yokulandwa kwezinombolo futhi sinabaxhasi bakawoyela lapha endaweni yesikhulumi laphaya futhi sinabantu abaningi lapha namuhla abajabulela isimo sezulu esihle kunamabhayisikili amahle kakhulu e-dish-dish lapho nabantu abaningi indawo enhle nansi ipaki enkulu ngemuva lapho sinebhola elihambayo sinethenisi siya empeleni kukhona ujantshi wamagn lapha oxhuma ukuze ukwazi ukuza lapha uvela edolobheni futhi-ke sinesakhiwo esikhulu lapha, izindlu zokugeza ezinhle kakhulu zonke izindawo ezinhle zokuba nomjaho, nathi sinabantu abahlela imishini yabo lapha emthunzini, ngeke kushise namhlanje, kuzoba nemfudumalo impela, cishe kungama-15 degrees Celsius manje, kuzoba ngaphezulu kwama-22 namuhla, usuku oluhle olufudumele, ngakho-ke lapho sehla lezi zitebhisi esikuso Lapho ufika Isiteshi se-Psycho-Tingu uvame ukuqasha amabhayisikili ambalwa lapha omama abanikela ngosizo abayi-1 00 yen ngomjikelezo ngamunye futhi sinemishini embalwa yokuthengisa abantu abaningi beza lapha ngezinsuku imindeni eminingi iza nalapha nezingane zayo kodwa namuhla usuku lomjaho, okusho ukuthi singashayela ithrekhi ngokushesha umjaho wamahora amathathu lapha Sinezinye izisebenzi zokuzithandela ezimbili ezinjengami lapha sinoTim phambi kwami ​​ngebhantshi lethu elihle lokuphepha Sinesikhathi sokupompa umculo ngoba umhlangano wababhali unomyalezo uTim umlayezo kubabukeli bomhlaba wonke kuyashisa yebo kukhona uthuli olufanelana nesithuthuthu sakho ngaphambi kokuba umjaho uqale kungumsebenzi wami, cishe isigamu sekhilomitha elingena emzileni ukuthola indawo enhle ongayiqala ngayo umjaho empeleni uqala njengesiqalo esingathathi hlangothi ngakho umjaho ngokusemthethweni uqala kuphela lapho ngiphakamisa leli fulegi ngakho-ke ngivumela indawo enhle ibheke imizuzu embalwa ngaphambi kokuqala bese kuthi lapho kuma bese liphakamisa ifulegi bese liqala ukumemeza ngakho-ke ake sibheke indawo enhle ukusetha futhi leyo yinkanyezi asambe siye kuthrekhi ngeshwa ibhadi elincane libe nokuphahlazeka okukhulu, iqembu langaphambili lafika nelinye iqembu elikhulu futhi lenza izinga laba bantu abahamba kancane, abanye abantu abasheshayo futhi abagcwele kakhulu futhi behla lawa amanxeba ami amahle lapha izimoto ezisilandayo namabhayisikili ami acabalele abantu abathathu lapha kodwa abantu abaningi bangene kothayela, bebukeka belungile, lawa ngamanxeba amahle lapha futhi ibhayisikili lihamba kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi basibuyisele emuva lapha ukuthola usizo lokuqala ngakho-ke sizobheka ibhayisikili kancane kodwa isondo langaphambili liphephile, amathayi acijile futhi kunemihuzuko embalwa engiyibonile kodwa ngethemba ukuthi awukho umonakalo omkhulu ifreyimu asilaphe isilonda futhi ngeshwa ngeke siyithole le 200k ebengiyifuna namhlanje ithole icala elingu-80 namuhla namhlanje ake sibheke ukuthi singasithola yini isixazululo sokuthi ngishayele usuku lonke abasamile namanje sesifikile nje lo mjaho kanye nomjaho wamahora amabili ngemuva kwalokho futhi wavuma isikhathi esihle kukhona ukhiye omusha kaDaniel noKido lapha uzongenela umjaho wamahora ama-2 ngokulandelayo ngiyabonga ungacindezeli yeah futhi ingoma ithola izithombe eziningi zamanxiwa ami noma kunjalo ukupholisa kufike ukubingelela nje, letha ukudla ukuze azoshiya uJohnnay futhi ngokubona kwakhe angivunyelwe ukubamba iqhaza kunoma yiziphi ezinye izinhlanga l take, kodwa umjaho wanamuhla uyingcosana ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ ,, ikakhulukazi ngoba bahlanganisa imikhakha yabaqalayo nabathuthukile ndawonye. Isizathu salokhu kuphahlazeka kwaba ukuthi abaqalayo nabafana abasheshayo babesondelene kakhulu futhi umuntu owayephambi kwami ​​ngeshwa wangena ngaphansi, yayingekho indawo yami nomuntu owayengahamba okungenani kube sengathi abantu abayishumi babe singene ngaphansi futhi abantu abathathu abakwazanga ukuqhubeka noma kunjalo asisagibeli eqenjini elisheshayo, ake sibuyele emgwaqeni abafana bethu abathathu basanda kuqeda futhi abafana bethu ababili basetha amabhayisikili abo sinamabhayisikili apholile lapha, ngakho-ke ake siqale siyibuke masishane ukuthi sinamajika akhethekile akhazimulayo yini umsebenzi wokupenda omuhle kakhulu, yebo, ithemba elicwebezelayo lokuthi akayishayeli futhi kancane asibadingi emncintiswaneni sinomnyama futhi I-pink giant canyon izwa ukuthi yonke ibhayisikili ngamasu ahlukile oh futhi ngiyabona ukuthi leli bhayisikili yiDokis Show DeRosa, namuhla wonke umuntu usekuhlukile kwe-Ascot nabanye abantu abambalwa abalungiselela amahora ama-2 ngakho nansi iBMC yami, ungabona ukuthi sinayo ukuklwebheka okuncane lapha nokuklwebheka okuncane lapha ngiyethemba lokhu ukuklwebheka nje nakhu okunye ukuklwebheka okuncane lokhu okuwumonakalo omkhulu emzimbeni omkhulu lapha kunemihuzuko embalwa esitsheni segiya ngakolunye uhlangothi kodwa lelo lisondo ngokwalo ungabona ukuthi libhujisiwe nje lapha nethayi kubi impela isondo ngokwalo lisalungile isondo lihle liphukile futhi lapha irimu lilimele kancane, kepha kusamele lisetshenziswe ngeshwa anginalo isondo elisele ngalesi sikhathi, ngakho-ke ngenhlanhla siboleka la mabhayisikili ekhabhoni lapha, kodwa kukhona amasondo akho e-carbon futhi ngiwaboleka kumuntu engisanda kuhlangana naye.
Nakanjani ngizoshayela ngiphephe kakhulu emjahweni olandelayo uJonny Guns Getthe bekungafanele abuke udaba namhlanje ngibona uGaddafi Nikki Michellechuchito engeke ayishaye Tonight iqembu liza, enye ingane yendawo ithole ikhokhasi ye-cancellara yaseNama namuhla, ngakho-ke singuDkt. Ikuma lection Akana, ngakho-ke ngeshwa sawa kanye nomngani wakhe ongisindisile namhlanje wangiboleka ibhayisikili lakhe ukuze ngiqedele ukugibela kwanamuhla, ngakho-ke siyabonga ngokusipheka futhi bahlala eduze nasesizweni, uyazi angisaqhubeki, yebo, noma yini, bahlala kancane eduze ngethemba lokuthi sizoziqeqesha ndawonye eduze ngabatshela ngokuzivocavoca kwethu nge-sprint, i-hey wacko nokuzivocavoca kwe-sprint esikwenzayo mhlawumbe baphuma bulala ake siye kwezinye zalezi zinto umuntu wesitolo wemali obucabanga ukuthi uyefana ulandela i-com yami ubona ezinye izinshungama ziboleka ulahlekelwa kanjani yimfucuza mangaki ama-youtube owazi ibhomu lemoto noma ingalo ye-st ick noma idolo igama lami yebo, kepha ukusinika isikhathi sokunyakaziswa kwamaprotheni ngangikhathazeka kakhulu Ngicabanga ukuthi ngifika kanjani ekhaya, kodwa ngenhlanhla uJim ungiboleka isondo lakhe langaphambili agibele ngalo lapha, ngakho-ke Uma ethola ibhayisikili lami elonakele ngizolilanda emuva kwesikhathi ukuze ngikwazi ukuya ekhaya manje, ngenhlanhla liyi-5 7K kuphela kimi ukufika ekhaya sisuka lapha ikakhulukazi ekwehleni manje sishayela isikhathi se-podium ngakho-ke ngine-athikili yanamuhla enomqondo oqale ngohlelo lokuphusha u-200 K kuze kube semkhawulweni futhi ngeshwa angikwazanga ukukusebenzisa namhlanje ngeshwa konke akusebenzi ngemuva kohlelo ukuphahlazeka bekungalindelekile futhi ngeshwa kwangena ngaphansi, kodwa ngenhlanhla konke kucezu olulodwa kuphela amanxeba enyama amabili futhi ngethemba ukulimala okuncane kubhayisikili ngithemba ukuthi kuyisondo nje asithembe ukuthi kuyimiklwebho embalwa nje manje ngigcina iminwe yami iwelele wena ngibe nesikhathi esimnandi namuhla abantu abaningi baphume bathi njengesiteshi sihlale sisho ukuthi sithanda uma iqembu leqembu lisithi lithole abangane abasha. Namuhla kuhle ukwenza abangane abasha, abantu abasha obajwayele ngamabhayisikili nabangane abasha bokuqeqeshwa.
Kuyahlekisa impela ngomuntu oyedwa owathi ubekhomba ezinye zezingxenye zami zeStrava Kids futhi empeleni wathatha enye yezingxenye zami ngaphambili futhi ngangithukuthele ukuthi ngithole iposi ngaphuma ngalithatha ngakusasa Emuva ngosuku ukuze saba nombango omncane kangaka eStrava, bekulokhu kumnandi sidudulana yilokho engikuthandayo ngalo mdlalo futhi kungaphezulu asiphele i-vlog yanamuhla lapha ngenxa yokubuka njengami sengivele ngasho udaba engizolivivinya ibhayisikili lami elisha le-Wahoo ikhompyutha kusasa, ngakho-ke hlola le ndatshana futhi njalonjalo ngiyabonga ngokubuka, ngizokubona ngokuzayo lapha kubasebenzi bamathuluzi obekufanele babhalise uma unezindatshana eziningi ezikhuluma ngesihloko Ukuhamba ngebhayisikili kufanele zibone impilo eJapan sizokubona ngokuhamba kwesikhathi esihlokweni esilandelayo ukuze wazi ukuthi usuyayeka
Yisiphi isithuthuthu sezintaba esihle kakhulu semali?
Yonke inqubo yokukhiqiza – kusuka ekuqaleni kwebhayisikili elisha, kuye ekwakhiweni kwayo, prototyping, testing, iterating and all the way to the final product – kwenzeka ebhodini lethu le-Impec Advanced R & D eGrenchen, eSwitzerland.
Liyini ibhayisikili elihle lokungena ezintabeni? Ngithola lo mbuzo nsuku zonke. Kungakho namhlanje ngikunikeza amathuluzi owadingayo ukuthola ibhayisikili elisha noma elisetshenzisiwe lezintaba, ngaphandle kohlobo lomkhiqizo. Kepha okokuqala kudingeka sichaze ukuthi liyini ibhayisikili elisezingeni lokungena.
Uma usaqala ngemali engenamkhawulo leyo ngxoxo isiphelile. Mane uphumele lapho futhi usebenzise inqwaba yemali ngebhayisikili elihle futhi usuqedile. Kepha ngicabanga ukuthi iningi labaqalayo lifuna ukuzibophezela okuncane kakhulu kwezezimali abangakwenza ngenkathi besathola ibhayisikili elifanele lentaba.
Namuhla ngifuna wenze sengathi leli bhayisikili alinambala futhi alinawo amalogo. Sibona kanjani ngokungenaphutha ukuthi 'iyalandeleka' uma uyihlola nje? Ake siqale ngesibonakaliso esibaluleke kakhulu sebhayisikili elihle lezintaba: isiphanyeko sedreyini. Uma ibhayisikili lasezintabeni lifakwe isici sangemuva, kufanele silengiswe ohlakeni lwale nsimbi encane ebizwa ngokuthi i-hanger.
Ngisho namabhayisikili alula anokusikwa kwesiphanyeko, okusetshenziswayo okubukeka kahle kwe-derailleur lapha. Ngakho-ke uphenyo lwakho kufanele luqale futhi mhlawumbe luphele ngalo. Ingxenye elandelayo ebalulekile okufanele uyibheke yisiqu se-SS esinezintambo, ongasibona ngalezi zibopho zokuqinisa lapha, nalawo mabholidi ama-4 abamba isibambo endaweni.
inja ehamba ngebhayisikili
Uma amathayi antantayo engenakugwenywa lapho uhamba ngebhayisikili entabeni, kuyinkinga ukuhlala unesihlakala se-15mm nawe ukususa la manati. Okubi kakhulu, amabhayisikili asezintabeni anamantongomane kuma-ekseli cishe akunakwenzeka ukukhuphula amasondo, futhi amasondo angenye yezinto ozozidlula njengoba uthola ulwazi. Ngakho-ke kubhayisikili lezintaba elisezingeni lokungena, funa ama-lever wokukhipha ngokushesha futhi uma ubona amantongomane, hlala kude.
Ngaphandle kwalokho, funa okuthile ongakuchoboza. Into elandelayo okufanele uyibheke ngamabhuleki ediski angaphambili nangemuva. Ngisho namabhuleki ediski ashibhile angashintshelwa kokungcono, kubalulekile ukuthi uqaphele ngoba ibhayisikili lakho kumele libe namaphuzu okunamathisela lokhu kusukela ekuqaleni.
Okubaluleke kakhulu, amabhuleki ediski athembeke kakhulu kunamabhuleki erimu, yingakho imboni yamabhayisikili asezintabeni isheshe yashintshela kuwo emashumini eminyaka adlule. Ngoba intaba enhle. Uma ibhayisikili ligcinwa liphansi futhi lithuthukiswa, umuntu kufanele asolise kakhulu ngelinye ngaphandle kwamabhuleki ediski.
Ekugcineni, udinga ukuqinisekisa ukuthi ibhayisikili liza ngosayizi abahlukahlukene nokuthi empeleni umenzi unikeza ukuholwa ukuthi udinga usayizi onjani. Lokhu kulula njengokusebenzisa iGoogle, ubuciko obulahlekile. Kunoma ikuphi, uma umenzi enganikeli ngalolu lwazi, kungenzeka ukuthi abacabangi kakhulu ngamabhayisikili abo ngakho-ke akufanele uwethembe ukuthi uzokungenisa phakathi ehlathini, ngakho-ke le nkomba ayiyona inhloso encane kunezinye , kodwa kufanele okungenani ube neyodwa Thola ibhayisikili elikufanelayo.
Ngenkathi kunezinye izinkomba eziningi zebhayisikili elilungele umzila, azisebenzi kakhulu uma ibhayisikili okukhulunywa ngalo lingahlangabezani nezidingo esizidingayo. Manje sizogxila kokulindelekile kubhayisikili elisezingeni elifana naleli, nezinye zezinto ongazenza ukuze ulithuthukise. Okokuqala, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi cishe wonke amabhayisikili asezingeni lokungena angama-hardtails noma amabhayisikili ngaphandle kokumiswa kwangemuva.
Ukuxhumeka okudingekayo ekumisweni kwangemuva kuyabiza futhi kuyasinda, ngakho-ke ngokuvamile akufanelekile ukutshala imali uze uqale ukwephula iphuzu lenkulungwane yamadola. Ukuze kube lula, sizokhawulela le ngxoxo kuma-hardtails. Ama-Hardtails ayathandeka futhi ayashesha, ngakho-ke asalungile ukuqala ngawo.
Le hardtail emnyama eseduze ne-Overdrive iyisibonelo esihle sebhayisikili lomzila. Imfoloko erakiwe, ama-engeli anolaka, izibambo ezibanzi, ukuhamba okude, nesiqu esifushane kukwenza kube ngcono ngohlobo lokugibela engikwenzayo. Njengoba ungeke ukwazi ukuguqula ibhayisikili le-XC libe yibhayisikili lakwaTra il noma okuphambene nalokho, udinga ukuthembeka ngalokho ofuna ukukwenza ngebhayisikili lakho lasentabeni ngaphambi kokulithenga.
Kepha uma isabelomali sakho singaphansi kwama- $ 500, noma ngabe uyathanda noma cha, ungathola ibhayisikili le-XC ngesikhathi ekugcineni uqhubekela phambili ngokugxuma uphinde uphonsa ibhayisikili cishe kancane, ungazizwa uphoqelekile. Nakhu engikwenzile ukuthuthukisa amandla webhayisikili lami le-XC. Into engcono kakhulu ongayenza, izandla phansi, ukushintsha amathayi.Lapho ngiphonsa lawomathayi abanzi, asinekile ku-overdrive yami, kwaba ngathi ibhayisikili elihluke ngokuphelele.
Ngikwazile ukusebenzisa la mathayi ngcindezi ephansi, okwenze ukuthi abambe futhi athethelele ngokwengeziwe. Kodwa akuphelelanga lapho. Uyakuzwa konke ukukhala kweketanga lami kushaya izandla kuyo yonke indawo, futhi impela laphuma ngokuphelele emaconsi nokweqa okuningana.
Ukulungisa lokhu, ngafaka umhlahlandlela wamaketanga owaqeda inkinga. Lokhu kuzokubiza imali encane kakhulu kunokuthuthukisa idrivetrain yakho, engakugijimisa kalula njengaleli bhayisikili. Ukube bengingumuntu oqalayo ukufika kude ngangokunokwenzeka ngaleli bhayisikili, bengingathuthukisa ama-pedals futhi mhlawumbe nemfoloko entweni efana nalena.
Ukuhamba ngale kwalapho bekungeke kube ukonga futhi kubhekwe ukuthi ibhayisikili elihloniphekile lingabamba inani lalo kahle, kungaba ngcono ukulithengisa futhi uthuthukise yonke into. Ekugcineni, uma usuvele unebhayisikili futhi uthola ukuthi lehluleka ezinye zalezi zivivinyo, usengazuza kule ndatshana. Uma okwamanje ikusebenzela futhi uzijabulisa nayo ke qhubeka ushaye futhi uma uzizwa sengathi ikubambezela, manje unamathuluzi wokuthola okuthile okungcono.
Lokho kusho ukuthi asikhulumanga ngokuhlangana, ukugcinwa, noma konke okunye ongakucela, ngosizo lwababukeli bami, ngizokwenza konke okusemandleni ukubaphendula kumazwana abekiwe. Ngakho thola ibhayisikili labaqalayo elihle futhi ulijabulele. Ngoba usalelwe unyaka nje ukuthi uthengise konke onakho futhi uxhase ngebhayisikili lezezimali elibiza ngokunganaki. Kwenzeka kwabangcono kakhulu kithi.Siyabonga ngokungilahla namuhla futhi sizokubona ngokuzayo.
Ameleni amabhayisikili e-BMC?
Amabhayisikili amahle kakhulu wezintabaNgaphansi kwama- $ 500
Iqoqwana TheIntaba29.Okuhamba phambiliUkuxoxisanaIntaba Ibhayisikili.
Imijikelezo ye-Co-op DRT 1.0.Okuhamba phambilinge umfutholuketshezi Disc Amabhuleki.
IMongoose switchback - Eyabesifazane neyabesifazane.Okuhamba phambiliI-Hardtail engabiziMTB.
INeffice 27.5Intaba Ibhayisikili.
IVilano Blackjack 3.0.
Amafutha eMongoose MalusIbhayisikili.
Ngabe iBMC ingcono kuneTrek?
BMCamabhayisikili ayamangalisa futhi ahlukile kakhulu. Uzogqama esixukwini, uma lokho kubalulekile kuwe. Ziqinile kakhulu futhi zine-geometry enhle kakhulu uma iqhathaniswa ne-UkuhambaUMadones, noma kunjalo. Hlola ukugibela bobabili, njengoba ngizobheja ukuthi bazizwa behluke kakhulu. r.
Ngabe amabhayisikili e-BMC agijima kakhulu?
Ama-BMC kokuhlangenwe nakho kwami, athanda ukugijimakancaneenkulungosayizi wabo ophawuliwe. Ngigibele ezingama-53 namuhla futhi bekubukeka kukuncane, kepha uqinisekisile nje engikusolayo; ukuthiIBMC iyagijimakancaneenkulu. Bengithi mababambe lezi ezingama-55 bazilethe esitolo esiseduze nami.Okthoba 29 2011
Ngabe amabhayisikili e-Cervelo enziwa e-USA?
UzimeleIbhayisikiliIphuzu Lokuqala:Amabhayisikili eCervelozakhiwe futhi zenzelwe eCanada futhikwenziwae-Asia.UCerveloinesikhungo se-R & D endaweni ye-U.S.lokho kukhiqiza ukugijima okulinganiselwe ngaphezulu komugqaibhayisikili,UCerveloI-R5ca ne-P5x iyikukhiqiziwengokubambisana ne-HED eMinnesota.
Ngabe iCervelo yenziwa eChina?
ICervelo'sinkampani yaseCanada eyenza amabhayisikili abo angeneI-Chinakodwa abathengi abaningi bakholelwa ukuthi bayinkampani yaseYurophu eyenza amabhayisikili eYurophu.15 uNovemba. Unyaka we-2007
Yimaphi amabhayisikili enziwe eChina?
I-Chinainezinkampani ezingaphezu kuka-200 ezikhiqiza izithuthuthu kuzwelonke.EChinaAbakhiqizi bezithuthuthu abahamba phambili bahlanganisa iGrand River (uhlobo lweHaojue), iLifan, iLoncin, iZongshen, iJialing, iJianshe, iQianjiang, i-Haojin, iShinineray, iBashan, iJonway, iWuxi Futong kanye neNkanyamba.
Lakhiwa nini ibhayisikili lokuqala le-BMC?
Ikhasi leBikeRadar leBMC linazo zonke izindaba zakamuva, izibuyekezo kanye nezici emabhayisikili omgwaqo waseSwitzerland, amabhayisikili entaba nesikhathi. I-BMC yasungulwa ngo-1994 eGrenchen, eCanton Solothurn.
Yini eyenza ibhayisikili lezintaba iBMC lihambe phambili?
Ibhalansi ephelele yokusinda, ukuqina namandla. I-Xical geometry ye-Radical yokuhlasela imikhondo yezobuchwepheshe enokuzethemba okugcwele okuhlangene nobuchule bezigaba eziyinselele. Ibhayisikili elihlanjululwe elinqamula ezweni elenza ukuhlangana okuhle kokusebenza, ukusebenza kanye nobuhle.
Yikuphi ibhayisikili lezintaba elishibhile kakhulu le-BMC XC?
Ukuphendula isimo esandayo sobuchwepheshe bemjaho wesimanje we-XC, iBMC ibuyele ebhodini lokudweba yakha isitayela esisha sebhayisikili elihamba izwe lonke ngesitayela esisha somncintiswano, kanti iFourstroke 01 Three yibhayisikili le-XC elishibhe ngokuphelele elishibhile phuma kulokhu kulungiswa okuphelele.
Imibuzo nezimpendulo ezi-sweat
Kuyini ukujuluka kwakho? Umjuluko waziwa nangokuthi ukujuluka (yithi: pur-spuh-RAY-shun), futhi wenziwa cishe ngokuphelele ngamanzi, ngamanani amancane amanye amakhemikhali afana ne-ammonia (yithi: uh-MOWN-yuh), urea (yithi: yoo -REE-uh), usawoti, noshukela. (I-Ammonia ne-urea ziyasala lapho umzimba wakho wephula amaprotheni.)
ngigunde izinwele zami
Sika izinwele zami ngokwami ​​- izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Ungazilimaza izinwele zakho ngokuzisika? Kepha ungakhuthazeki kakhulu. Yebo, ukusika kwakhe ekhaya kuyahlaba umxhwele futhi sekunegciwane ngokuphelele ngemiphumela yalo emihle kepha nali iqiniso lodaba: Uma uzizama ngokwakho, cishe ngeke ugcine ngomphumela ofanayo. Eqinisweni, ukuhamba nge-DIY akuyona nje ingozi yesitayela, kungalimaza nezinwele zakho.
ukugqoka kanjani i-monitor rate monitor
Ungayigqoka kanjani imonitha yokushaya kwenhliziyo - umhlahlandlela wokugcina
Usebenzisa kanjani umqaphi wokushaya kwenhliziyo wesifuba? Bopha intambo esifubeni sakho, ngezansi nje kwemisipha yesifuba, bese unamathisela ingwegwe kolunye uhlangothi lwentambo. 4. Ukuqinisekisa ukutholwa kwesiginali yenhliziyo enhle, hlola ukuthi izindawo ezimanzi ze-electrode ziphikisane ngokuqinile nesikhumba sakho nokuthi uphawu lwePolar yesixhumi lusendaweni emaphakathi futhi lumile.
Ngabe imisipha ingaqiniswa - izixazululo ezingaba khona
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqinisa imisipha? Njengezicubu, imisipha ayisebenzi kakhulu uma iqhathaniswa nento efana nemisipha. Ngakho-ke kuthatha isikhathi eside ukuqinisa ngokuphendula uhlelo lokuzivocavoca. Ngenkathi amanye amacala angadinga izinyanga eziyisithupha noma ngisho nangaphezulu ukuthi alulame, amacala amaningi azoxazululwa ezinyangeni ezingu-2-3.
ukubuyekezwa kwe-pivot switchblade
Ukubuyekezwa kwe-Pivot switchblade - izixazululo eziqinile
Ingabe i-switchblade ye-pivot iyakufanele? Yebo, kuyiqiniso: i-switchchblade iyabiza impela, kepha futhi i-chic darn enhle. Ngamashubhu ayo ekhabhoni ayakheke kahle nolimi lokuklama oluhlanzekile, iheha ngokushesha. Ukuhlala kwesihlalo esigobile akukhona nje ukugqamisa okubonakalayo kepha futhi kuyadingeka ngenxa yokuphakama okukhulu kanye nonxantathu ongemuva. 4 февр. 2020 г.
amagilavu ​​okuhamba ngebhayisikili
Amagilavu ​​okuhamba ngebhayisikili - ungabhekana kanjani nawo
Yimaphi amagilavu ​​okuhamba ngebhayisikili ahamba phambili? Ubusika be-TestCycling glovesUkwahlulelwa1. I-GripGrab Hurricane WindproofWarmth: Isinqumo Sokugcina: 2. I-Sealskinz Ingangenwa Manzi Konke Ukushisa Kwe-Weather Fusion: Isinqumo Sokugcina: 4. Sealskinz All Weather Cycle Glove 2021 Ukufudumala: Isinqumo Sokugcina: 5. Imfudumalo: Isinqumo sokugcina: